Nnwom 73 NA-TWI - NKYƐM A ƐTO SO ABIƐSA NNWOM 73-89 - Bible Gateway
Nnwom 72Nnwom 74
Nnwom 73 Nkwa Asem (NA-TWI)
73 Onyankopɔn ye ma Israel ne wɔn a wɔn koma mu tew ampa ara. 2 Nanso anka mereyɛ apa abaw; me gyidi sae koraa, 3 efisɛ, sɛ mihu sɛ nneɛma rekɔ yiye ma ahantanfo ne amumɔyɛfo a, na m’ani abere. 4 Wonhu honam mu yaw; wosi pi si ta. 5 Wonhu amane sɛnea afoforo hu no. Ɔhaw nto wɔn sɛnea ɛto afoforo no. 6 Enti wɔhyɛ ahantan sɛ konmude, ne basabasa sɛ atade. 7 Wɔn koma hwie bɔne gu, na amumɔyɛ adwene ahyɛ wɔn adwene ma. 8 Wɔserew afoforo na wɔka wɔn ho nsɛm a enye. Wɔyɛ ahantan na wodwen ɔkwan a wɔbɛfa so ahyɛ wɔn so. 9 Wɔka bɔne fa Onyankopɔn a ɔte soro ho, na wɔahyɛ nnipa a wɔwɔ asase so ahantan so.